विज्ञानहरूको विज्ञान : मार्क्सवाद – eratokhabar
विज्ञानहरूको विज्ञान : मार्क्सवाद
ई-रातो खबर २०७६, २ बैशाख सोमबार ०९:१६ April 15, 2019 459 Views
“गणितहरूको आवश्यक पर्ने प्रस्थान विन्दूका तथाकथित स्वयंसिद्ध तथ्यहरू हुन् जसले गणितका केही विचार निर्धारण गर्दछन् । गणित भनेको मापनको विज्ञान हो; यो मापनको यसको प्रस्थान विन्दूको अबधारणा हो, यसले अविश्वानिय तरिकाले र त्यसपछि अरू मापनहरूको प्रारम्भिक निर्धारणको परिभाषा गर्दछ, परिभाषामा रहने होइन, स्वयंसिद्ध तथ्यबाट बाहिर, अप्रमाणित देखिन्छ, र गणितीयरूपमा अप्रमाणित पनि देखिन्छ । परिणामको विश्लेषणले यी सबै स्वयं सिद्ध तथ्यहरूलाई प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने परिणामहरूको निर्धारण गर्दछ । टाउकोमा लगाउने नक्कली कपाल यतिसम्म सही देखिन्छन् कि यी स्वयंसिद्ध तथ्यहरू हामीलाई आत्माप्रमाणका रूपमा विरासतमा देखिन्छन् । तिनीहरू द्वन्द्वात्मक रूपमा, पूर्ण शुद्ध पुनरुक्तिभन्दा टाढा रहेका हुँदैनन् ।”२
एंगेल्सका माथिल्ला भनाईहरूले दुईवटा कुराहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रकृति विज्ञानका खोज, अनुसन्धान, आविस्कारको पहिलो सर्त भनेको दृष्टिकोण हो र त्यो आदर्शवाद नभएर भौतिकवाद हो भन्ने पुस्टि भएको छ । अर्को कुरा प्राकृतिक विज्ञानका नियमहरू समाज विज्ञानमा पनि लागू हुन्छ । यिनीहरूले दृष्टिकोणको पुस्टि गर्दछन् । त्यसमा पनि भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई व्यावहारतः पुस्टि गर्दछन् । त्यसैलाई पुस्टि गर्न एंगेल्सले १८७३—१८८६ सम्म प्रकृतिको द्वन्द्ववाद लेख्नु भएको थियो । १९१४ मा लेनिनले भौतिकवाद; अनुभव सिद्ध आलोचना लेख्नु भयो । यी तथ्यहरूले माक्र्सवाद र प्रकृति विज्ञानबीचको सम्बन्धलाई दर्साउँदछ । यति मात्र नभएर माक्र्सवादको विकास हुँदै गर्दा कार्ल माक्र्स र फ्रिडरिक एंगेल्सले उहाँका समकालिन र उहाँभन्दा अघिका विज्ञानका अनुसन्धान, खोज र आविस्कारहरूको गहिरो अध्ययन गरी मुलरूपमा ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सिद्धान्त र व्यावहारमा पुस्टि गर्दा तिनीहरूलाई आधार बनाउनु भएको थियो । वैज्ञानिकहरूको खोज आदर्शवादमा आधारित नभएर भौतिकवादमा रहेको हुन्छ । विज्ञानका खोज र आविस्कारहरू आदर्शवादको खण्डन गर्दै भौतिकवादमा आधारित हुने भएकाले धर्मभिरुहरूले भौतिकवादीहरूमाथि व्यापक दमन गरेको इतिहास रहेको छ । त्यसैले इसाईहरूले पहिलो महिला वैज्ञानिक हिपासिया, दोस्रो ब्रुनो र सर्भेन्टसहरूको हत्या गरेका थिए । यद्यपी यी कालहरूमा माक्र्सवादको आविस्कार भएको थिएन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई संश्लेषण गरिएको थिएन । तर पनि भौतिकवादका आधारमा आदर्शवादको खण्डनमण्डन भैराखेको थियो । त्यसैले माक्र्सवाद जसलाई समाज विज्ञान भनिने गरेको छ, प्रकृति विज्ञानका सिद्धान्त र नियम लागु हुन्छ । तलका तथ्यहरूले यी कुराहरूलाई पुस्टि गर्दछन् ।
मानव जीवनलाई सहज र श्रमको मात्रा र गुण दुवै बढाउन र बनाउनका लागि यन्त्रहरूको आविस्कार भएको थियो । इसा पूर्व २८७—२१२ मा आर्किमेडिजले उत्तोलकको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेर यान्त्रिक विज्ञानको शुरुआत गरेका थिए । त्यसमा थप विकास ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरेका थिए भने सर आइज्याक न्युटनले पूर्णता दिएका थिए । यान्त्रिक सिद्धान्तलाई रेने डेकार्टले (१५९६—१६५०)मा आफ्नो प्रशिद्ध पुस्तक दर्शनको सिद्धान्तमा “यो भौतिक जगत पदार्थका कणहरूको संघटन तथा गतिको परिणाम हो ।” स्पष्ट पारेका थिए । यान्त्रिक विज्ञानलाई वैज्ञानिक स्वरूप दिनु पर्दथ्यो र त्यसलाई गणितको सूत्रमा पनि ढाल्न जरुरी थियो । यसरी वैज्ञानिक स्वरूप दिने र गणितको सूत्रमा ढाल्ने काम सर आइज्याक न्युटनले १६४२—१७२७ मा आफ्नो प्रशिद्ध पुस्तक “प्राकृतिक दर्शनको गणितीय सिद्धान्त”मा गरेका छन् । न्युटनले प्रतिपादन गरेको यान्त्रिक सिद्धान्तका नियमहरू ३ वटा रहेका छन् । यसलाई चालका नियमहरू पनि भनिन्छ, यी हुन् जडत्व, प्रवेग र सन्तुलन । यी नियमहरू स्थूल बस्तुमा लागू हुने गर्दछन् ।
यान्त्रिक सिद्धान्तहरूका पनि कैयौं सीमाहरू रहेका छन् । उन्नाइसौं शताब्दिको उत्तराद्र्धमा जब विद्युतीय र प्रकाशकीय घटनाहरू देखि थाले त्यसपछि मात्र यान्त्रिक गतिका सीमाहरू सतहमा आएका थिए । तर पनि न्युटको यी सिद्धान्तहरूले वलको परिभाषा मात्र गरेनन् कि वललाई सूत्रबद्ध गर्दै त्यसलाई व्यावहारमा ल्याएका थिए । यसैका आधारमा गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण लगायतका वलहरूलाई बुझ्न र लागू गर्न सहज भएको थियो । यसको एकातिर द्वन्द्वात्क भौतिकवाद र अर्को समान रूपान्तरणमा वल प्रयोगको माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई सूत्र र व्यावहारमा पुस्टि गरेको छ । कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले माक्र्सवादको प्रतिपादन गर्दै गर्दा यी खोज र सिद्धान्तहरूलाई आधार मानेका थिए । माक्र्सले रसायन विज्ञानका बारेमा धेरै जानकारी राखेको बुझिन्छ भने एंगेल्सले सम्पूर्ण प्रकृति विज्ञानको तत्कालिन अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको देखिएको छ । त्यसैको परिणाम हो उहाँको पुस्तक “प्रकृतिको द्वन्द्ववाद” र “ड्युरिङ मत खण्डन”मा प्रशस्त उदाहरण र सन्दर्भ पाइन्छ ।
बिसौं शताब्दीको अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये परमाणविक शक्ति हो । यसकालागि सपेक्षताको सिद्धान्त जोडिएको छ । उक्त सिद्धान्तका प्रवर्तक अल्वर्ट आइन्स्टाइन हुन् । उनले सापेक्षताको सिद्धान्तको खोजी गरेका थिए र उक्त सिद्धान्तलाई गणितीय समिकरणमा पनि व्यक्त गरेका थिए । सामान्य रूपमा भन्दा सापेक्षता भनेको दुई बस्तुहरूबचिको सम्बन्ध हो । विज्ञान जगतको सापेक्षताको सम्बन्ध भौतिक गतिसँग छ र यसको क्षेत्र पनि भौतिक जगत मात्र हो । त्यसकारण सापेक्षताको सिद्धान्तलाई यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ—गति सापेक्ष छ निरपेक्ष छैन । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि बस्तु स्वयंमा गतिशिल वा स्थिर हुँदैन । अर्को बस्तुको तुलनामा(सापेक्षतमा) मात्र त्यो गतिशिल वा स्थिर हुन्छ । यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ भने गति सापेक्षित कुरा हो, निरपेक्ष होइन । गतिको यहि सापेक्षित प्रकृति र यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण भौतिक घटनाहरूलाई सूत्रबद्ध गर्ने वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई नै सापेक्षताको सिद्धान्त भनिन्छ ।
भौतिक गति दुई प्रकारका हुन्छन्—१) समरूप गति र २) असमरूप गति । यिनै दुईवटाको आधारमा सापेक्षताको सिद्धान्तको पनि दुई शाखा रहेका छन् १) विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त र २) सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त हो ।
त्यसो भए प्रकाश कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दछ त ? यसको सही उत्तर बेलायतका दुई जना प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकेल फराडे र जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलले प्रकाश विद्युतीय तरङ हो, प्रकाशलाई यात्रा गर्न कुनै माध्यमको आवश्यकता पर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेर दिएका थिए । तर उनीहरूले इथरको अस्तित्व नरहेको पुस्टि गर्न सकेका थिएनन् । आइन्साइनले इथरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर सापेक्षताको सिद्धान्तको खोजीलाई अगाडि बढाएका थिए । साथै आइन्स्टाइनले न्युटनको स्थान र समय निरपेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यतालाई खारेज गरेर सापेक्षताको सिद्धान्तलाई स्थान, समय र प्रकाशसम्म विस्तार गरेका थिए । उनले जडत्व यन्त्र अथवा अवलोकन कर्ताको सापेक्षतामा प्रकाशको गति ३ लाख किलोमिटर प्रतिसेकेण्ड हुन्छ भन्ने मानेका छन् । साथै स्थानको ३ वटा आयाम हुन्छन् भन्ने थियो । तर आइन्स्टाइनले त्यसमा अर्को आयम समय पनि रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । साथै उनले द्रव्य र शक्तिको सम्बन्धको पनि व्याख्या गरेका थिए । यसले गर्दा द्रव्यलाई शक्तिमा परिणत गर्न सकिने भएको छ । यसका साथै अहिले पदार्थको अन्त भयो, सबै स्थूल बस्तु विद्युतीकरण भएकाले माक्र्सवादको पनि मिति पुगिसकेको तर्क गरिराखेका सन्दर्भमा प्रकाशको गति र द्रव्य र शक्तिको सम्बन्धलाई परिभाषित गरिएपछि उनीहरूको तर्क स्वतः खारेज हुन पुगेको छ । आइन्स्टाइनले यसैको आधारमा शक्तिको गणितीय सूत्र भ्=mअद्द प्रतिपादन गरेका थिए । उनले प्रतिपादन गरेको उक्त सूत्रलाई प्रयोग गरी निर्माण गरिएको परमाणु बम १९४५ मा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा हानेर व्यावहारिक पुस्टि गरिएको थियो । यसका साथै आइन्स्टाइनका विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त अनुसार ढिलो समय, बस्तुको सङ्कुचन र अन्तिम सीमाको रूपमा प्रकाशको गति रहेका छन् ।
2 -Dialectics of Nature. Frederick Engels 1883 Notes and Fragments
२०७६ बैशाख २ गते सोमबार प्रकाशित
विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो
साहित्यकार रसुवाली कवि गिरफ्तार